Gbasara anyị - Mora Racing Wolfgang Mohr
NILE MORA RACING
Ọ niile bidoro na ụzọ kart na Kerpen, Manheim na 1994: agụụ maka asọmpi kart bidoro na anyị. Site na mbido anyị na-anya chassis nke akara Kali Kart - taa mara ika a n'ụwa niile dịka CRG na ọ na-aga nke ọma. N'ihe banyere injin, anyị na TM na Pavesi ụdị ọrụ.
Kemgbe ahụ anyị anọgidesiri ike na ngwaahịa a dị elu. N'oge a, ọtụtụ ka ka onwe m. Karting na ọrụ ejikọtara ya abụghị ọkachamara na ọkaibe dị ka ha dị taa. Anyị chọrọ ịbụ akụkụ nke mmepe a wee guzobe Mora Racing na 2000 iji nye ndị ahịa anyị nhọrọ nke ngwaahịa kachasị mma yana ndụmọdụ na ime ihe. Site na agụụ a toro bụrụ otu n'ime ụlọ ahịa kart n'ịntanetị na Germany n'afọ ndị sochirinụ. Ndị ahịa anyị maara ihe kpatara nke a.
Ugbu a, maka ncheta afọ nke iri abụọ anyị, anyị na-enye ndị ahịa anyị mmezigharị zuru oke, izu ike na ahụike karịa ka ọ dị na mbụ. Nwee ntụkwasị obi na ndị ọkachamara na karting.
Onye njikwa Mora Racing
Ọ B WHATR O na ANY C ndị ahịa kwuru
"Onye ọzụzọ azụmaahịa nwere izu oke nke nwere ahụmịhe ọfụma. Na-enyere aka na ndụmọdụ na ime ihe na akụkụ ahụ mapụtara.
TO-LIVE na Google
"Enwere m ike ikwu ihe dị mma banyere Mora-Racing. Wolfgang Mohr na-agba mbọ ịkwado onye ahịa maka ụdị TM okenye !!! ... na-eme ka okwu !!!
"Ntughari ohuru nke injin - injin ya dị ka nke ọhụrụ mgbe ejedebechara ma nwee ọtụtụ ike karịa. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè. Top ọrụ !!! Top shop !!
Kachasị mkpa mkpa banyere US
Ndị ahịa nwere ọ .ụ
ANYS NA-EKWU NIILE
ANYA ANYA COFFEE